Maxay yihiin su'aalaha ay tahay inaad weydiiso macmiilkaaga? | Abuurista khadka tooska ah
Maxay yihiin su'aalaha ay tahay inaad weydiiso macmiilkaaga kahor sameynta astaanta?
Jorge Neira | | logos
Warbixinta koobani waa farshaxan asaasi ah oo nadiif ah naqshadaynta iyo cusboonaysiinta aqoonsiga shirkadaha shirkad, markaa muhiimadda ay leedahay in la dalbado, markaa haddii aad ka fekereyso inaad qaabeyso astaantaada ama aad hagaajiso midka aad haysato, ha uga tagin qalabkan dhinac.
1 Waa maxay Warbixintu?
2 Sidee ayey Warbixintu uga caawineysaa xiriirka naqshadeeyaha?
3 Maxay tahay inaad sameyso macaamil ahaan?
4 Sida naqshadeeyaha
5 Shaqada kooxda
Waa maxay Warbixintu?
Waa nooc su'aaleed meesha nashqadeeyaha iyo shirkaddu is dhexgalaan taasi waxay ubaahantahay sameynta astaanta, ka jawaabida su'aalaha kujira ujeedkeeduna waa in lagu qeexo fikradaha sida ugu macquulsan si loo fuliyo shaqada naqshadeynta la codsaday.
Sidee ayey Warbixintu uga caawineysaa xiriirka naqshadeeyaha?
Waxaa macquul ah in isfaham darrada qaar ay labada dhinacba ka dhashaan, midkoodna maxaa yeelay waxaa la shaqaaleeyay nashqadeeyaha oo aan si ku filan u bixin mashruuca ama shaqadiisa oo la qiimeeyo, si kastaba ha noqotee, Warbixinta kooban waxay noqon kartaa mid aad u taageerto markaad gudbineyso fikradaha iyo fikradaha aad rabto inaad ku muujiso aqoonsigaaga shirkadeed.
Maxay tahay inaad sameyso macaamil ahaan?
Waxa ugu horreeya waa in la ogaado in shirkaddaadu ay tahay inay lahaato aqoonsi asal ah oo u gaar ah, kaas oo adiga kaaga shaqeynaya inaad u gudbiso fikradda farriinta taas oo ay ku aqoonsadaan, laga bilaabo tan waxay isku dayeysaa inay u gudbiso fikrado nadiif ah naqshadeeyaha waxayna siisaa jawaabo sax ah su'aalahooda ku saabsan fariinta aad rabto inaad u gudbiso dhagaystayaasha aad bartilmaameedsato, u sheeg aragtida macaamiisha ka qabaan shirkaddaada iyo waxa waa kaa; Haddii aadan si cad u maareynin nooca dhagaystayaasha aad rabto inaad wax ka qabato, isticmaal Warbixin kooban si uu kuu hago oo aad u go'aamiso intaas oo keliya, laakiin sidoo kale si fiican u qeex sawirka ganacsiga iyo inaad balaadhiso fikradda aad ka qabto shirkaddaada.
Ugu dambeyntiina, tani waxay faa'iido weyn u tahay labada dhinacba iyo waxay u oggolaan doontaa shaqada inay ahaato dheecaan badan.
Ka fogow maciishada xalalka qaarkood oo mabda’a ahaan ku fududaan kara laakiin mustaqbalka fog aan kuu shaqeyn doonin, tusaale ahaan ku dayashada astaamaha ama sawirrada jira, waxa ugu habboon ayaa ah in sawirka loo qaabeynayo uu tilmaamayo shirkaddaada, falsafadaada.
Waa inaad si cad uga muuqataa mas'uuliyadda kaa saaran mashruuca oo aad u diyaar garowdaa inaad weydiiso su'aalaha saxda ah kana jawaabto su'aalaha macmiilka waqtigiisa.
Qayb muhiim ah oo ka mid ah shaqo abuur Waa in la caddeeyaa shaki kasta oo ka dhasha geedi socodka ka hor inta aan la sawirin tan iyo markaas waa inaad doorataa nooca, midabada, qaababka, la wadaag fikradaha iyo ra'yiga iwm, adiga oo had iyo jeer kugu taageeraya warbixinta.
Xidhiidhka joogtada ah ee u dhexeeya labada dhinac waa aasaasi, naqshadeeyaha waa inuu awood u yeeshaa inuu u sharraxo naqshadda macmiilka, maadaama ay tahay wax soo saar wax kasta oo isaga laga codsaday, falanqayn iyo shaqadii hore.
Qof kastaa wuxuu leeyahay waajibaadkiisa hawsha, markaa macaamilku waa inuu u wakiisho xirfadlaha naqshadeynta iyo aamin aaminidaada iyo hal abuurkaaga, qofna kama fiicna tan inuu doorto walxaha astaantaada, isla mar ahaantaana waxaad yeelan doontaa mas'uuliyadda bixinta macluumaadka lagama maarmaanka ah iyo soo-jeedinta si loogu tixgeliyo sawirka shirkadda.
Ugu dambayntii oo haddii wax walba si fiican u soo baxeen, qayb ahaan bay wanaag u ahaan lahayd isgaarsiinta, jawaab celinta, wada shaqeynta kooxda iyo Warbixinta oo kooban, taas oo iyaduna qaybteeda qabatay.
Marxaladdan, markaad fiirineyso shaqada naqshadeynta hordhaca ah, waxaad fikrad ka heli doontaa sida sawirkaagu u ekaan doono iyo inuu gudbinayo farriinta la doonayo iyo in kale, ka dib waxyaabaha layaabka leh ayaa laga fogaan doonaa marka soo-jeedimaha ugu dambeeya ay diyaar yihiin.
Macmiilku wuxuu horumarin lahaa xiriir wanaagsan oo uu la yeesho naqshadeeyaha iyo kooxdiisaba shaqada haddii uu heli lahaa, wuxuu dareemi doonaa qanacsanaan maadaama uusan u dhowaanayn himiladiisa laakiin waxaa la fududeeyay mahadnaqidda iyo tayada macluumaadka, taas oo bixinaysa adiga kale qalab casri ah in lagu fuliyo aqoonsiga shirkadda dhammaan qaababka la codsaday, si loo bixiyo talo ku habboon.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » Maxay yihiin su'aalaha ay tahay inaad weydiiso macmiilkaaga kahor sameynta astaanta?
Goorma ayey tilmaame qaab loo baahan yahay tahay?
Hagaha, Qiyaasaha iyo Qalabka si loogu abuuro sawirro shabakadaha bulshada